Car Ọrụ Compressor
Land Rover Ọrụ Compressor
Komatsu Ọrụ Compressor
Kia Ọrụ Compressor
Mahindra Ọrụ Compressor
Mazda Ọrụ Compressor
Mercedes Benz Ọrụ Compressor
Mitsubishi Ọrụ Compressor
Nissan Ọrụ Compressor
Perodua Ọrụ Compressor
Suzuki Ọrụ Compressor
Volkswagen Ọrụ Compressor
Chevrolet Ọrụ Compressor
Hyundai Ọrụ Ọrụ Compressor
Ike sterịn ogbe
Kacha mma mma Ọrụ kacha mma
Anyị nwere ike ịmepụta compressor TM13-TM31
Ofu & Agbanwe agbanwe
Anyị na-emepụta ofu & Agbanwe ọnọdụ mwepụ nnwere onwe.
Ọkachamara Ọdụ ụgbọ mmiri Hydraulic dị na ọnụahịa ụlọ ọrụ
Dị ka otu n'ime ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ụgbọ mmiri Hydraulic, Berlin bụ ọkachamara na nrụpụta akụrụngwa akụrụngwa ikuku na ọdụ ụgbọ. The n'iru ogbe ngwaahịa atụmatụ edo àgwà nke ikuku mgbasa. Ejirila okpomoku ikuku na mmiri iru mmiri ka ọ bụrụ otu.
Best Quality ESP Na Electric Car n'iru ogbe
tochọrọ ịchọta ụlọ ọrụ akpaaka nke na-ebunye ọdụ ụgbọ elu dị elu? Lelee vidiyo a ma mara nkọwa ndị ọzọ gbasara ESP na eletriki eletriki eletrik na ọnụ ahịa ego site na Guangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
& ọrụ azụmaahịa maka akụkụ AC gị
Anyị nwere ezigbo R
$ $ $> D na QC otu nke ndị injinia Japan nwere ihe karịrị afọ 40
na Compressor, anyị na-enye OEM na ọrụ azụmaahịa. Anyị nwere ike ịzụlite na rụpụta compressors si 110cc-450cc, nke ike-eji maka njem ụgbọ ala, injinịa ụgbọ ala na friji gwongworo. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ngwaahịa ịchọrọ na weebụsaịtị anyị, nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị, anyị ga-enyocha gị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ngwaahịa ị chọrọ, anyị nwere ike ịzụlite maka gị dị ka ọchịchọ gị Anyị nwere ike ịnye ịse na nlele maka gị iji gosi.
Teknụzụ ndị Japan
Ndị ọrụ injinia Japan
nwere ihe karịrị afọ 40
Anyị na-agafe IATF16949
Otu afọ akwụkwọ ikike
OE ụlọ ọrụ
Anyị na-enye ụgbọ ala OE
ụlọ mmepụta ihe
Ngwaahịa anyị emeriela ọtụtụ asambodo gbasara ogo na ihe ọhụrụ
Guangzhou BERLIN Auto Parts Manufacturing Co., Ltd, nke e guzobere na 2006, bụ ụlọ ọrụ ọhụụ nke ọkachamara na-arụpụta igwe nrụpụta ikuku. Companylọ ọrụ anyị nọ na Zhuliao Industrial Zone Baiyun District Guangzhou City, na-ekpuchi mpaghara nke 20 acres na mpaghara osisi karịrị 10,000 square mita. A kwadebere ya na njem dị mfe na 5KM site na Baiyun International Airport na ihe karịrị narị ndị ọrụ abụọ gụnyere ihe karịrị ndị ọkachamara ọkachamara 50. Na mgbakwunye, anyị nwekwara nnwere onwe R& D ndi otu ndi otu ahia na ndi oru aka na-echere inye gi oru kacha mma.
Companylọ ọrụ ahụ nwere otu njikwa njikwa dị elu. Ọ gafere akwụkwọ ikike IATF16949 na ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta ụlọ ole na ole iji rụọ ọrụ nke ọma. O gosiputala otutu ulo oru na ihe nlere di iche iche nke gunyere ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi mmadu ndi ozo tinye aka, ndi mmadu na-acho ha, ndi mmadu na-achoputa ha. , ule vibration, nnu ịgba ule igwe wdg Anyị nwere nlezianya mma njikwa maka akụkụ ọ bụla anyị mere. Anyị nwere teknụzụ na njikwa njikwa maka nyocha na eserese eserese, mmepe ebu, nhazi oghere, ule arụmọrụ.
Anyị nwere ụdị ngwaahịa atọ dị iche iche bụ Compressor Variable Displacement Compressor na-achịkwa, na-achịkwa ndị na-agbanwe agbanwe na-agbanwe agbanwe na ndị nwere mgbatị. Anyị na-agbasi mbọ ike inweta nnwapụta ndị ahịa anyị ma tụkwasị obi na mma anyị kwụsiri ike, ọnụahịa asọmpi na ọrụ dị mma. Anyị na ngwaahịa na-exported ka Europe, n'ebe ndịda na n'ebe ugwu America, n'ebe ọwụwa anyanwụ na n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Asia wdg
Hergbaso nzube nke "mmepe ntọala na àgwà, aha na-adabere na ịtụkwasị obi" na ụkpụrụ nduzi nke "ịmepụta uru maka ndị ahịa anyị, ndị ọrụ na ndị mmekọ", anyị ga-agbanwe teknụzụ dị elu na ngwaahịa dị elu iji jeere ọha mmadụ ozi na na-enye aka na mmepe nke ụlọ ọrụ ụgbọ ala China.
OEM omenala ngwọta
Pụrụ ịdabere na àgwà izute ndị ahịa anyị na-achọ
A na-ebupụ ngwaahịa anyị na Europe, ndịda na north America, ọwụwa anyanwụ na ndịda ọwụwa anyanwụ Asia wdg Anyị nwere ndị ahịa n'ụwa niile. Anyị Compressor niile ohuru, niile akụrụngwa si OE soplaya na otu afọ akwụkwọ ikike. Anyị bụ OE soplaya Car factory.
Anyị nwere ihe karịrị afọ 14 ‘ahụmịhe nke ịkpụpụta na ịzụlite ụzọ ụgbọ. Anyị na-na-ezitekwara n'elu n'iru akụkụ ika na North America na Russia.
Biko hapụ gị ozi kọntaktị, anyị ga-enye gị VIP ọrụ otu na-adịghị anya.